Ogaden News Agency (ONA) – Rwanda oo Magangaliyo Siinaysa Tahriibayaasha Kudhibaataysa Libiya.
Rwanda oo Magangaliyo Siinaysa Tahriibayaasha Kudhibaataysa Libiya.
Dowlada Rwanda oo ka cadhootay qaabka xun ee loola dhaqmo tahriibayaasha Afrikaanka ah ee ku sugan dalka Liibiya ayaa sheegtay in ay irideeda u furi doonto qaxootigaasi in ay dalkeeda yimaadaan.
Talafeeshinka CNN TV ayaa shaaciyay muuqaalo laga soo duubay dadka ku sugan Liibiya oo ay kala iibsanayaan kooxaha Tahriibta ka shaqaysa, filimkaasi oo xiisad ka abuuray dalalka Afrika qaarkood oo safiiradooda kala soo baxay wadanka Liibiya.
Dawlada France ayaa todobaadkan ka codsatay Golaha Amaanka ee Qaramada Midoobay (QM) kulan gaar ah oo looga hadlayo xaalada iyo qaabka loola dhaqmo tahriibayaasha ku dhibaateysan Liibiya. Filimkan laga soo duubay Kooxaha ay Soomaalidu u taqaan “Magafe” ayaa waxaa sidoo kale ka cadhooday Midowga Afrika (AU) oo ku dhawaaqay in la baadhi doono dhamaan shaqsiyaadka ku lug leh ka ganacsiga dadka tahriibayaasha ah.
Dawlada Rwanda ayaa noqoneysa dalkii ugu horeeyay oo Afrikaan ah oo sheegay in ay guryahooda ku casuumayaan dadka tahriibta ah ee ku dhiban Liibiya. Wasiirada Arrimaha Dibada ee Rwanda Louise Mushikiwabo ayaa sheegtay in dalkooda uu yahay mid yar balse ay gacmo furan kusoo dhawaynayaan dadkaasi walaalahood ah ee Afrikaanka ah. Dowlada Rwanda ayaa mar walba sheegta in dhibaatooyinka Afrika xalkooda laga raadiyo Afrika dhexdeeda, waxayna talaabadaasi ay doonayso in ay ku muujiso go’aankooda.
Inkastoo Dalka Rwanda yahay wadan aad u yar oo kasoo kabanaya dagaaladii sokeeye, balse wadankaasi ayaa hada noqday dalalka horumarka ugu badan sameeyay isla markaana dhaqaalihiisa sii kobcayo.